Ala eze Kongo - Afrikhepri Fondation
Welcome AKWỤKWỌ AFRICA
En Central Africa ebe oke ọhịa dị, ndị isi obodo ahụ chọrọ ịmanye onwe ha aghaghị ịlụ ọgụ megide agwa ọjọọ.
Ndi ochichi di egwu nke nwere oge di egwu, ana akpo ha ndi ochichi, ndi isi n’icheputa ihe iji kpochapu ohia.
Ahịa na Portugal
Ala eze Kongo toro eto n'akụkụ abụọ nke ọnụ Congo na-ekele Ntinu Wene, nwoke nwere akara igwe.
Na kọntaktị na Portugal site na narị afọ nke 15, Kongo ngwa ngwa ghọrọ steeti kachasị ukwuu na mpaghara ahụ, n'ihi mgbanwe azụmahịa ya: osisi ndị a na-eri eri na-ebubata site na America, mmanụ nkwụ mpaghara, ọdụdụ na ehi (ego nke mkpokoro anakọtara na n'ụsọ oké osimiri) Ọ bụ mgbe ha na-achọ ụzọ ha ga-esi banye n’Oké Osimiri India ka ndị Portuguese hụrụ ya.
Mmekọrịta nke mbụ mere ka ndị nnọchi anya ndị nnọchianya dị n'etiti Lisbon na Mbanza-Kongo, isi obodo nke alaeze ahụ.
Ndị na-eto eto bụ́ ndị Mongolia gara ọbụna ịgụ akwụkwọ na Europe, na 1513, otu n’ime ụmụ eze nke oge ahụ gwara Pope okwu na Latin.
Mana n'ihi ogologo oge, nkwukọrịta n'etiti mba abụọ ahụ ka dị ụkọ. Ndị nnọchianya nke Portugal, ndị ahịa na ndị njem ahụ, mechara were ike niile. Ha nọ na-eche alaeze ahụ nche site na agwaetiti dị na Sao Tome, nke na-abụ ebe nkwakọba ihe maka ndị ohu.
Site na nrụgide sitere n'aka ndị Portuguese, Kongo mechara bụrụ onye Vassal nke Portugal. A manyere ya ọbụna ịnapụta ndị ohu, jidere na mba ndị agbata obi.
Mana na 1665, mgbe ndị Portuguese manyere ya ịnapụta ndị ohu Kongolese ma kpughee ọnọdụ ebe a na-egwupụta akụ, onye ọchịchị Kongo, Antonio nke Mbụ, jụrụ. E meriri ndị agha ya wee mee ka isi ya laghachi na Loanda, Luanda n'ọdịnihu, nke ghọkwara onye na-asụ Portuguese.
Mgbe ha rutere Kongo, ndị Portuguese nụrụ banyere ndị isi ala dị ike na Congo Basin.
Landas bụ ihe kachasị ike, na-achịkwa mpaghara nke kwekọrọ na Katanga, nke dị na ndịda Congo-Kinshasa. Ha ji aha ọla ọcha enyere ha ego maka imepụta ego.
Na narị afọ nke iri na asatọ, ha bụ ndị isi azụmaahịa dị n'etiti Kongo, nke ndị Portuguese na-ekpo ọkụ nke egbe, na ụsọ Oké Osimiri Indian ebe ha na-achịkwa ojiji nke ụjọ nke nwere ihe ize ndụ ịsọ mpi ego ọla kọpa ha.
Ala eze Kongo site na XNUMX ruo na XNUMXth
7 ọhụrụ site na .8,50 XNUMX
3 ejiri site na 16,84
Zụta € 8,50
Emelitere ikpeazụ na Jenụwarị 17, 2021 10:34